बाबुराम भन्छन्ः कम्युनिस्ट गठबन्धनले देशमा आर्थिक संकट ल्याउँछ (भिडियोसहित) « Janata Samachar
बाबुराम भन्छन्ः कम्युनिस्ट गठबन्धनले देशमा आर्थिक संकट ल्याउँछ (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : 14 November, 2017 3:05 pm
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई अहिले नेपाली कांग्रेससँगको तालमेलपछि गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा चुनावी अभियानमा हुनुहन्छ ।
कांग्रेससँग भएको तालमेलपछि डा. भट्टराईले गोरखामा चुनावी अभियानलाई तीब्र पारिरहनुभएको छ । सुरुमा वाम गठबन्धनसँग तालमलेको प्रयास असफल भएपछि उहाँले कांग्रेससँग सहयोग लिएर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ।
एमाले–माओवादीको दम्भले वाम गठबन्धनबाट आफू बाहिरिन बाध्य भएको बताउँदै डा. भट्टराईले आफूले समाजवादी पार्टी बनाउन गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेकाले आफूले फरक निर्णय लिनुपरेको बताउनुभयो ।
गोरखा २ मा चुनावी अभियानमा रहेका बेला जनता टेलिभिजनका अरुण देव जोशीले गोरखामै पुगे कार्यक्रम द भ्यूका लागि गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।
कस्तो भइरहेको छ चुनावी अभियान ?
अत्यन्तै उत्साहजनक पाएको छु । गोरखामै जन्मिएको म यहाँका जनताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलिरहेको छ । जे जति काम मैले गरेँ,सेवा गरेँ, गोरखाली जनताले माया सदभाव गरेको पाएको छु ।
लगातार दुई पटक माओवादीबाट जित्नुभयो । अहिले नयाँ शक्तिबाट हुनुहुन्छ । अहिले कस्तो छ प्रतिक्रिया ?
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा ८२ प्रतिशत, दोस्रो चोटी ५८ प्रतिशत मत ल्याए । त्यो बेला सबै दलका मतदाताको मतसहित विजयी भएको थिएँ । अहिले वाम लोकतान्त्रिक विचारसहित चुनावी अभियानमा छु । अहिले पनि चुनाव जित्छु भन्ने विश्वास छ । कांग्रेससँग तालमेल गरेर चुनावी प्रतिस्र्धामा रहेकाले यो अभियानले सहज बनाएको छ ।
विगतमा जोसँग प्रतिस्पर्धा थियो अहिले उहीसँग तालमेल छ, के भन्नुहुन्छ यसलाई ?
प्रतिस्पर्धा त बहुदलीय लोकतन्त्रमा जो सँग पनि भइरहन्छ । कहिले को सँग हुन्छ ? सधैँ एउटैसँग हुन्छ भन्ने हुँदैन । नेपाली, कांग्रेस र एमाले शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री हुन् । १२ बुँदेका बेला पनि मैले सबै दलसँग सहकार्य गरेको छु। अहिलेको सहकार्यलाई सहज रुपमा लिएको छु ।
वाम गठबन्धन छाडेर कांग्रेससँग तालमेल गर्नुभयो ? किन यस्तो हुन पुग्यो ?
विश्वमा शीत युद्धकालमा उदारवादी पुँजीवादी विचार र राज्य नियन्त्रित कम्युनिस्ट विचारधारा उदायो । अहिले नयाँ धार आएको छ । मैले वाम लोकतान्त्रिक धार बनाउन खोजेको हो । वाम र लोकतान्त्रिकसँग सहकार्य हुन्छ । अहिले हामी वाम र लोकतान्त्रिक दुवै धारकासँग उत्तिकै दुरीमा छौँ ।
कम्युनिस्ट गठबन्धनले देशमा ठुलो संकट ल्याउँछ । यदि सत्तामा पुग्नुभएछ भने पनि देशभित्र र बाहिरको पनि लगानी आउँदैन । पश्चिम बंगालको जस्तै आर्थिक संकट यहाँ आउन सक्छ ।
त्यो बेला वामका पक्षधरका दलहरु अत्यन्तै असहिष्णु देखिनुभयो, निषेध नै गरेर जान खोज्नुभयो । स्टालिनकालमा माक्र्सवादको भ्रष्टीकरण भएर आफ्ना विरोधीहरुलाई आक्रमण गर्ने अनि भौतिकरुपमै समाप्त गर्ने काम भएको थियो, त्यस्तै व्यवहार उहाँहरुले देखाउनुभयो । स्टालिनकालको जस्तै धङधङी केही नेताहरुले देखाउने प्रयास गरे । त्यही कारण सहकार्य हुन सकेन । चुनावी तालमेल हो पार्टी एकीकरण होइन ।
तीन वामसँग तपाइँले एकीकरण नै भन्नुभयो, किन हतार भएको थियो र ?
हो, त्यतिबेला मैले हतार नै गरेको रहेछु, म केही भ्रममा परेको रहेछु । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा संयुक्त वक्तव्य बनाउँदा संयुक्त कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने कुरा भएको थियो । त्यो बेला मैले कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनुको औचित्य छैन भनेको थिएँ । त्यो बेला कम्युनिस्ट केन्द्रको विकल्पमा समाजवादी केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गर्दा केही नेता राम्रो कुरा हो पनि भनेका थिए । त्यो बेला केहीले अहिले चुनावी तालमेल मात्रै हो भनेकाले म विश्वासमा परेँ ।
तर, उहाँले पुरानै कम्युनिस्ट पार्टीकै गठबन्धन गरेर, कम्युनिस्टकै व्यानरमा हिँड्ने देखेपछि मैले त्यसलाई उपयुक्त ठानिनँ । नेपालको विकास र विश्व परिदृश्य हेर्दा त्यो उपयुक्त थिएन। मेरो अडान भनेको हामीले भर्खरै सामन्तवादको अन्त्य गरेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण गरी निजी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । विदेशी लगानीका लागि विश्वासनीय वातावरण नबनाइ वितरण र समाजवादका कुरा गर्ने बाटो भनेको अत्यन्तै संक्रिण र जडसुत्रवादी देखेपछि मैले नयाँ शक्तिलाई नै विकास गर्नेतर्फ लागेको हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य छैन भन्दैहुनुहुन्छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्त काम छैन भन्नुभएको हो कि यो तत्कालीन प्रतिक्रिया हो ?
मार्क्सवादको सैद्धान्तिक प्रस्तावना द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अहिलेसम्म सही र सत्य छ । तर, त्यसको राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा अब लागू हुँदैन । अब एक दलीय शासन लाद्न सकिँदैन । एमालेले बहुदलीय जनवादसँगै त्यसलाई छाड्यो । माओवादीले म हुँदै छाडेको हो । अब हामीले जनता र पार्टीलाई भ्रम छर्नु उचित हुँदैन त्यही कारण मैले समाजवादी नीति अपनाउनुर्पछ ।
नयाँ शक्ति पार्टी अब सोसियल डोमेक्रयाटिक पार्टी हो ?
हामी सोसियलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी भन्न रुचाउँछौ । सोसियल डेमेक्रेटिक मात्रै भन्दा नवउदारवाद हावी भए जस्तो आउँछ । यसमा चाहिँ हामी व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको हित पनि कदर होस भनेर हामी सोसियलिस्ट डेमोक्रेटिक बाटोमा जाँदैछौँ ।
हिजो एउटै पार्टीमा भएका साथीसँग प्रतिस्पर्धा छ, के भन्नुहुन्छ ?
हिजोदेखि जनताकोबीचमा काम गरिरहेको छु । मलाई माया गर्नुभएको छ । उहाँको कर्मथलो यहाँ थिए । उहाँले मलाई निषेध नै गर्न खोज्नुभयो । यसलाई जनताले रुचाएका थिएनन् । म हिजोदेखि जनताको हितमा क्रियाशील छु । ४० वर्षदेखि योगदान दिएकाले मलाई जनताले जिताउँछन् भन्ने विश्वास छ।
सुरुमा तपाइँले मिलेर जाऊँ भन्दा मान्नु भएन रे हो ?
पहिले पनि जितेकाले म स्वतः उम्मेदवार हो । मेरै पालामा बूढीगण्डकी परियोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य विकासका योजना ल्याएको हो । तर मैले जुन क्षेत्रमा योगदान दिएँ, मेरो साथीले त्यहीँ जिद्धी गर्नुको कारण मैले बुझेको छैन ।
जनतााबाट के अपेक्ष पाउनुभएको छ ?
जनताले अहिले छिटो विकास र समृद्धि हुनुपर्छ । बाटा घाटा पुल पुलेसा बन्नुपर्छ भन्ने पाएँ । अहिले अत्यन्त क्रियाशील महिला र आमाहरु पाएँ । उहाँहरु आफ्नो पूर्वाधार आफैँ बनाउन सक्रिय हुनुभएको छ ।
जनयुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यो बाटो छाडेर अलग हुनुहुन्छ ? के भन्नुहुन्छ ।
मैले जनयुद्धको बाटो छाडेको होइन । बाटो पुरा भयो र नयाँ बाटोमा लाग्यो पनि नभन्नु । यो एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो । जनयुद्धले संविधासभाबाट गणतन्त्रसम्म पुर्यायो । शास्त्रीय रुपमा रुसी क्रान्ति जस्तो सबै ठाउँमा सम्भव छैन । अब आर्थिक क्रान्तिबाट समाजवादमा पुग्नुपर्छ भनिरहेको छु मैले ।
समृद्धि आफ्नै पालामा कहिले पुरा होला ?
आगामी २०४० सम्म नेपाल मध्यमस्तरबाट उच्चस्तरसम्म पुग्न सक्छ । त्यो अहिले पनि सम्भव देख्नुछ । नयाँ शक्ति तत्कालै ठुलो पार्टी नबन्ला । अहिले राष्ट्रिय पार्टी बन्यो भने हामी अघि बढ्छौँ । कम्युनिस्ट गठबन्धनले देशमा ठुलो संकट ल्याउँछ । यदि सत्तामा पुग्नुभएछ भने पनि देशभित्र र बाहिरको पनि लगानी आउँदैन । पश्चिम बंगालको जस्तै आर्थिक संकट यहाँ आउन सक्छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा पनि राजनीतिक एजेन्डा मात्रै छन्, आर्थिकरुपमा सम्मुनत हुने योजना छैन । त्यसकारण पनि हामी यो ध्रुवीकरणबाट हामी अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ ।
विस्तृत अन्तरवार्ता यहाँ हेर्नुहोस्
‘सरकारले थोरै पहल गरे खर्बौ पैसा आउँछ, दाता गुहार्नु पर्दैन’ (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको ६३औं अधिवेशनका क्रममा अमेरिका पुगेर
चन्द्रागिरी केवलकार दशैंमा पनि खुल्ने
काठमाडौं । दशैंमा चन्द्रागिरी केवलकार दशैंमा पनि खुल्ने भएको छ । चन्द्रागिरी हिल्स प्रा.लिका महाप्रबन्धक
नाकामा कडाई गरेका छौँः पन्त (भिडियोसहित)
काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख बसन्त पन्तले दशैँ, तिहार र छठलाई मध्यनजर गरी
धमला पत्नी एलिजा कस्तो पकाउँछिन् खाना ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । चलचित्र अनुरागबाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकी नायिका एलिजा गौतमको चर्चा विभिन्न कारणले हुँदै
खम्बाले लगायो श्रीपेच
कान्ति न्यौपाने काठमाडौं । विगतमा विभिन्न राजाले बिशेष कार्यक्रममा पहिरिने गरेको श्रीपेज अब खम्बाले लगाएको छ । राजहाँसको प्वाख र…
शोभा साक्षी राख्दै जेरीले भनिन्, ‘शंकरबाट…
काठमाडौं । लोक तथा दोहोरी गायक शंकर क्षेत्री नेपालगञ्जका हुन् । यस्तै, लोक तथा दोहोरी गायिका बबिता बानियाँ जेरी गोरखाकी…
शीर्ष नेताको दशैँ काठमाडौंमै
काठमाडौं । शीर्ष नेता तथा मन्त्रीहरूले राजधानी काठमाडौंमा नै दशैं मनाउने भएका छन्। सत्तारूढ दलका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओली…
कसरी ल्याइन्छ गोरखाबाट फूलपाती ?
काठमाडौं । हनुमानढोका दरबारस्थित दशैँघरमा गोरखाबाट भित्र्याइने फूलपाती लिन धादिङको छत्रे देउरालीतर्फ जाने टोली तयार गरिएको छ । गोरखाबाट ल्याएको…
–नारायण भण्डारी नेपाली समाजमा भव्यताका साथ मनाइंने महान् पर्व बडा दशैंको छैटौं दिन आश्विनशुक्लषष्ठी तिथिमा शक्ति स्वरुपा भवानी माता कात्यायनीको…
मितिः २०७५ असोज २९ गते सोमबार बिहान ५ः०० स्टेसन आइडी ५ः०२ राष्ट्रिय गित ५ः२५ मालश्री धुन ५ः३० तीर्थ पर्यटन प्रस्तोताः…
वामदेवलाई दुई विकल्पः काभ्रे–२ कि नवलपुर–२ ?
‘अब पैसाको कुरै नगरौँ’ – माग्ने बुढा
थुनामै रहने भए सिके राउत
दशैंको जुत्ता कस्तो छ ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
सवारी दुर्घटनामा १० जनाको मृत्यु, १२ घाइते
फेरिएको दशैँ शुभकामना
टीकाको दिन निःशुल्क बस सेवा